ပရိုတက်တီနီယမ် - ဝီကီပီးဒီးယား
(Protactinium မှ ပြန်ညွှန်းထားသည်)
ပရိုတက်စတီနီယမ် (Protactinium) သည် အက်တီနီယမ်စီးရီး(Actinium Series) တွင်ပါဝင်သော ငွေရောင် သတ္တုဒြပ်စင်ဖြစ်သည် ၎င်းဒြပ်စင်သည် အလွယ်တကူပုံသွင်း၍ရသော တောက်ပသည့်၊ ငွေမှင်ရောင် ရေဒီယိုသတ္တိကြွသည့် ဒြပ်စင်တစ်ခုလည်းဖြစ်သည်။ လေထဲနှင့် ထိတွေ့မိပါက အလွယ်တကူ အရောင်မှေးမှိန်သွားခြင်းမရှိပါ။ ပရိုတက်စတီနီယမ် သည် လေ၊ ရေခိုးရေငွေ့ အက်စစ်တို့နှင့် ဓာတ်ပြုနိုင်စွမ်းရှိသည်။ သို့သော် Alkalis (အက်စစ်တို့နှင့် ဓာတ်ပြုကာ ဓာတုဗေဒ သဘောအရ ဆားဖြစ်သောအရာ) များနှင့် ဓာတ်ပြုနိုင်စွမ်းမရှိပေ။
သိုရီယမ် ← ပရိုတက်တီနီယမ် → ယူရေနီယမ်
အတည်ငြိမ်ဆုံး ပရိုတက်တီနီယမ်၏ အိုင်ဆိုတုပ်များ
syn 1.5dε 0.311 229Th
syn 17.4dε 1.310 230Th
100% 3.276×104 y α 5.150 227Ac
syn 1.31dβ− 1.337 232U
trace 26.967dβ− 0.5701 233U
trace 6.75 h β− 2.195 234U
trace 1.17 min β− 2.29 234U
၂ သဘာဝမှာ တွေရှိမှုအခြေအနေ
ရေဒီယိုသတ္တိကြွမှုအားကောင်းခြင်း၊ အဆိပ်အတောက်ဖြစ်စေနိုင်ခြင်းတို့ကြောင့် မျက်မှောက်ခေတ်တွင် ကျယ်ပြန်စွာ အသုံးပြုခြင်းမရှိပါ။
ပရိုတက်စတီနီယမ်၏ အိုင်ဆိုတုပ်တစ်ခုဖြစ်သော Protactinium 231 ကိုသဘာဝ ယူရေနီယမ်သတ္ထုရိုင်းထဲတွင် တွေ့ရှိရသည်။ သဘာဝ သတ္တုရိုင်း Zaire တွင်လည်း 3ppm ခန့် တွေရှိရသည်။Protactiniumအား မြေကြီး၊ ကျောက်တုံး၊ ရေမျက်နှာပြင်၊ ရေအောက်၊ အပင်များနှင့် သက်ရှိများ တွင်ပါဝင်မှုှ အလွန် နည်းပါးသည်။
ပရိုတက်စတီနီယမ်သည် လူခန္ဓာကိုယ်အတွင်းသို့ စားသောက်ခြင်း၊ သောက်သုံးခြင်း (သို့) အသက်ရှူခြင်း တို့မှဝင်ရောက်နိုင်သည်။ ပရိုတက်စတီနီယမ်ကို ရှူရှိက်မိသောအခါ အနည်းငယ်သော ပမာဏသည်အဆုတ်မှ သွေးထဲကိုဖြတ်သန်းကာ အခြားသော အစိတ်အပိုင်းများထဲသို့ ဝင်ရောက်သွားနိုင်ပြီး ယင်းအစိတ်အပိုင်းများထဲတွင်ရှိသော ကွန်ပေါင်း များပေါ်တွင် မူတည်ကာ ပြောင်းလည်းသွားနိုင်သည်။ ဂါမာ(ဂမ္မာရောင်ခြည်ဟုလည်းခေါ်)ရောင်ခြည် မှ ထွက်သော protactinium-231 ကြောင့်ပြင်ပထိခိုက်မှုအနည်းအကျဉ်းရှိသော်လည်း ယေဘူယျအားဖြင့် protactinium အား ကိုင်တွယ်မှသာ ကျန်းမာရေးအပေါ်ထိခိုက်နိုင်သည်။ protactinium ကိုသယ်ဆောင်လာသော ဖုန်မှုန့်၊ protactinium ပါဝင်သောရေ၊ ပရိုတက်စတီနီယမ်ထိုးသွင်းထားသော အစားအစာများကြောင့်ထိခိုက်မှုရှိနိုင်သည်။ လေကိုရှူသွင်းခြင်းကြောင့် protactinium သည် ခန္ဒာကိုယ်ထဲသို အသက်ရှူလမ်းကြောင်းမှတဆင့် အလွယ်တကူဝင်ရောက်နိုင်သည်။ အရိုး အသည်း ကျောက်ကပ်တို့ တွင် protactinium မှထွက်လာသော ions များကပ်ငြိခြင်းကြောင့် ကင်ဆာရောဂါများဖြစ်ပွားနိုင်သည်။ ရောဂါဖြစ်ပွားနှုန်းဟာ uranium-238 နဲ့ protactinium-234m တို့ ပေါင်းစပ်ခြင်းအားဖြင့်လည်း ဖြစ်ပေါ်နိုင်သည်။ protactinium-234 ပြိုကွဲခြင်းဖြင့် စွမ်းအားရှိသော beta particles (အမှုန်ငယ်လေးများ) ထွက်လာနိုင်သောကြောင့် uraniumကိုင်တွယ်သောအခါ ကာကွယ်ရန် ထူထဲသောရာဘာလက်အိတ်များ စွပ်ခြင်းတို့ဖြင့် ကြိုတင်ကာကွယ် နိုင်သည်။ ခန္ဓာကိုယ်ထဲသို့ တိုက်ရိုက်သွင်းခြင်းကြောင့်ရသောရာခိုင်နှုန်းမှာ ရှူသွင်းခြင်းနှင့် ယှဉ်လျှင် နည်းပါးပါသည်။
↑ "On the crystal structure of protactinium metal" (1959). Acta Crystallographica 12 (9): 697. doi:10.1107/S0365110X59002031.
↑ Cverna, Fran, ed. (2002)။ "Chapter 2. Thermal Expansion"။ ASM Ready Reference: Thermal Properties of Metals (PDF)။ ASM International။ p. 11။ ISBN 0871707683။
"https://my.wikipedia.org/w/index.php?title=ပရိုတက်တီနီယမ်&oldid=718461" မှ ရယူရန်
၁၃ နိုဝင်ဘာ ၂၀၂၁၊ ၁၅:၂၅ အချိန်တွင် နောက်ဆုံး တည်းဖြတ်ခဲ့သည်။